Budget Truck Rental Batavia in Batavia, New York with Reviews & Ratings - YP.comFind People•Advertise With UsBrowseFind PeopleFeatured CollectionsRestaurantsAutomotiveHome ImprovementHealth & WellnessAttorneysPeople Searched For...Extended Stay HotelsCab ServiceRestaurantsApartments For RentShopping MallsNail SalonsFactory Outlet MallsBeauty SalonsSmoke ShopPawn ShopSocial Security AdministrationStudio ApartmentsLiquor StoresMotelsApartment ComplexesUsed Car DealersPizza PlacesCigarettesDentistsHouses For RentBanquet Halls Reception FacilitiesBed Breakfast InnsVeterinariansAre you alocal business owner?Advertise with YPor call 888-367-2194What do you want to find?Search by business name, or keywordnearWhere? Address, ZIP Code, or NeighborhoodMy current locationSearchSign In•JoinHomeBatavia, NYBudget Truck Rental BataviaBatavia Budget Truck Rental BataviaSort:DefaultDefaultDistanceRatingName (A - Z)FiltersFiltersMore NeighborhoodsEast DelavanEdgertonGenesee MoselleMaplewoodDoneClear AllMore CategoriesAutomobile StorageBoat StorageBusiness Documents & Records-Storage & ManagementCar RentalCold Storage WarehousesMoving BoxesMoving Equipment RentalMoving-Self ServicePackaging MaterialsSelf StorageStorage Household & CommercialTrailer Renting & LeasingTruck RentalUsed Car DealersVan Rental & LeasingDoneClear AllCategoryTruck RentalMoving-Self ServiceTrailer Renting & LeasingMore »FeaturesBook a TableCouponsBook an AppointmentNeighborhoodsEast DelavanEdgertonGenesee MoselleMore »Sponsored LinksThe Career Fast TrackGet Trained & Start Your Career InAbout A Year. Learn More At UTI.eduwww.uti.eduTraining ProgramsThe UTI AdvantageStart Your CareerTake The Next StepAdd to mybookRemove from mybookAdded to your home collection!Error when adding to home collectionThis business was removed from the home collectionInaccurate Result?1. The Storage Mall of BataviaServices8250 Bank Street RdBatavia, NY 14020(585) 343-9049Truck RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?2. Budget Truck Rental3845 W Main Street RdBatavia, NY 14020(585) 344-1809Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?3. Budget Truck RentalServices(1)8781 Alexander RdBatavia, NY 14020(585) 343-1735Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?4. Budget Truck Rental50 Liberty StBatavia, NY 14020(585) 343-2097Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?5. Budget Truck RentalServices2418 State Route 19 NWarsaw, NY 14569(585) 558-4149Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?6. Budget Truck Rental461 N Main StWarsaw, NY 14569(585) 786-0480Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?7. Budget Truck Rental27 Frank StWarsaw, NY 14569(585) 786-0480Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?8. Budget Truck Rental9329 W Ridge RdBrockport, NY 14420(585) 637-0910Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?9. Budget Truck Rental2418 Warsaw Wyoming RoadWarsaw, NY 14569(585) 786-2070Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?10. Budget Truck Rental6597 S Transit RdLockport, NY 14094(716) 625-9495Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?11. Budget Truck Rental4364 Pondside PlzGeneseo, NY 14454(585) 243-3040Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?12. Budget Truck Rental930 Maple RdElma, NY 14059(716) 655-5087Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?13. Budget Truck Rental2061 Chili AveRochester, NY 14624(585) 247-7120Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?14. Budget Truck Rental434 Elmgrove RdRochester, NY 14606(585) 247-8520Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?15. Budget Truck Rental3999 Genesee StBuffalo, NY 14225(716) 632-4675Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?16. Budget Truck Rental190 Jefferson RdRochester, NY 14623(585) 475-1991Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?17. Budget Truck Rental4077 W Henrietta RdRochester, NY 14623(585) 334-6290Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?18. Budget Truck Rental585 Manitou RdHilton, NY 14468(585) 349-4399Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?19. Budget Car & Truck Rental1200 Brooks AveRochester, NY 14624(585) 235-3278Truck RentalCar RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?20. Budget Car & Truck Rental4200 Genesee StBuffalo, NY 14225(716) 632-4662Truck RentalCar RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?21. Budget Car & Truck Rental3999 Genesee StBuffalo, NY 14225(716) 632-4662Truck RentalCar RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?22. Budget Car & Truck Rental10 Miracle Mile DrRochester, NY 14623(585) 424-2858Truck RentalCar RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?23. Budget Car & Truck Rental317 Greece Ridge Center DrRochester, NY 14626(585) 368-0138Truck RentalCar RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?24. Budget Truck Rental1132 W Ridge RdRochester, NY 14615(585) 663-0744Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?25. Budget Truck Rental6240 S Transit RdLockport, NY 14094(716) 625-9496Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?26. Budget Truck Rental332 W Main StHoneoye Falls, NY 14472(585) 624-3570Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?27. Budget Truck Rental1340 Millersport HwyBuffalo, NY 14221(716) 636-4817Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?28. Budget Truck Rental358 Lake AveRochester, NY 14608(585) 254-5664Truck RentalTrailer Renting & LeasingWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?29. Budget Truck Rental2408 Bailey AveBuffalo, NY 14215(716) 893-6717Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?30. Budget Rent A Car4200 Genesee StBuffalo, NY 14225(716) 632-4662Truck RentalCar RentalWebsiteDirectionsMore InfoSponsored LinksShowing1-30
of 37results12NextIf we're missing a business and you'd like to make a suggestion, please do! Add a business.Add a New CollectionOops! There was a problem saving the new custom collection.Please try again.Collection Name cannot be emptyUpload a Photo(optional)Remaining Characters: 100Remaining Characters: 500CancelSaveMap ViewFeatured Truck Rentalin Batavia, New YorkAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?Penske Truck Rental4181 Veterans Memorial DrBatavia, NY 14020Other Locations »(888) 991-0734WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Enterprise Rent-A-Car226 W Main StBatavia, NY 14020(585) 344-3100WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your home collection!Error when adding to home collectionThis business was removed from the home collectionInaccurate Result?Uncle Bob's Self Storage(1)Find a Location(866) 247-6895WebsiteSpecial OffersVideoMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?Rush Truck LeasingServing the Batavia Area.(800) 626-5200WebsiteMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Alamo Rent-A-Car(27)Serving the Batavia Area.(800) 362-2725Drive Alamo. Drive HappyWebsiteMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Enterprise Rent-A-Car(34)Find a Location(866) 799-7959Free pick-up from your home, office or repair shopWebsiteSee Our RatesVideoMore InfoAboutAbout UsSite FeedbackContact UsAdvertise with UsCareers - We're HiringCorporate BlogEngineering BlogLegal